Imiphumela emibi yeLatuda nokuthi ungayigwema kanjani | Okufanayo - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Inkampani, The Checkout Ukuphuma Izidakamizwa Vs. Umngani Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo Inkampani, Izindaba Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuphila Kahle Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Cindezela Imfundo Yezempilo, Izindaba
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Imiphumela emibi yeLatuda nokuthi ungayibalekela kanjani
Imiphumela emibi yeLatuda nokuthi ungayibalekela kanjani
Imiphumela emibi yeLatuda | Ukuzuza kwesisindo | Ukuhoxa | Imiphumela emibi ihlala isikhathi esingakanani? | Izexwayiso | Ukusebenzisana | Ungayigwema kanjani imiphumela emibi
ILatuda (isithako esisebenzayo: i-lurasidone hydrochloride) yigama lomkhiqizo elinqanda i-antipsychotic eligunyazwe ukwelapha i-schizophrenia kwabasakhulayo nakwabadala kanye nokwelapha ukudangala kwabantu abadala nezingane ezineminyaka engu-10 noma ngaphezulu okutholakala ukuthi linenkinga yokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo. Ingabuye ihlanganiswe ne-lithium noma i-valproate yokwelapha ukucindezeleka kwe-bipolar kubantu abadala. ILurasidone, isithako esisebenzayo eLatuda, sithinta umsebenzi we-dopamine ne-serotonin, amakhemikhali asiza ukudlulisa amasiginali phakathi kwemizwa. Njengayo yonke imishanguzo eguqula amakhemikhali obuchopho, iLatuda ingaveza imiphumela emibi, ibe yimbi kakhulu eminye yezimo, futhi ihlanganyele neminye imithi.
OKUSHIWO: Funda kabanzi ngeLatuda | Thola izaphulelo zeLatuda
Imiphumela emibi ejwayelekile yeLatuda
Njengayo yonke imithi, iLatuda ingadala imiphumela emibi noma yesikhashana. Bangaphezu kuka-1 kubantu abangu-20 uzoba nemiphumela engemihle njengokulala, isicanucanu, ukungahlaliseki kahle, ukucasuka kwesisu, noma ukunyakaza okungazibandakanyi.
Ezigulini ezithatha iLatuda, imiphumela emibi kakhulu ebikiwe yile:
I-Akathisia (isifiso esingenakuphikiswa sokuhamba)
Izimpawu ze-Extrapyramidal (ukuthuthumela, ukuthuthumela, ukunyakaza okungazibandakanyi, ukuvuza amathe)
Kunzima ukunyakaza noma ukunyakaza okuhamba kancane
Imiphumela emibi eminingi ilingana nomthamo — uma uphakama umthamo, iba nkulu ubungozi nobukhulu bemiphumela emibi emincane. Funa iseluleko sezokwelapha uma uhlangabezana nanoma yimiphi imiphumela emibi lapho uthatha iLatuda.
Imiphumela emibi yeLatuda
Yonke imishanguzo ye-antipsychotic ingadala imiphumela emibi futhi yesikhathi eside. Imiphumela emibi yeLatuda ifaka phakathi:
Izinguquko ze-Metabolic eziholela kushukela ophakeme wegazi, ama-triglycerides aphakeme, i-cholesterol ephakeme, i-sodium ephansi yegazi, noma isifo sikashukela
Nciphisa amaseli amhlophe egazi
Isifo esibuhlungu se-Neuroleptic
Imicabango yokuzibulala nokuziphatha
Njengeminye imishanguzo ye-antipsychotic, iLatuda ingahle iholele ekuguqulweni kwemetabolism nasekuzuzeni isisindo, yize lokhu kungencane futhi kungabonakali kakhulu kunemithi efanayo. ILatuda ingahle ingabi yimithi efanele abantu abanomlando womndeni wesifo sikashukela noma isifo se-metabolic.
Yonke imishanguzo yokulwa ne-psychotic iphazamisa amandla omzimba wokulawula ukushisa komzimba. Ngenxa yalokhu, abantu abathatha iLatuda basengozini eyengeziwe ye-heatstroke (hyperthermia), isimo sezempilo esisongela impilo. Ukuqapha kufanele kuthathwe ukugwema isimo sezulu esishisayo noma i-overexertion lapho uthatha iLatuda.
ILatuda yandisa ubungozi bemicabango yokuzibulala nokuziphatha ezinganeni, ebusheni, nakubantu abadala abelashelwa ukucindezeleka okuguquguqukayo. Lapho unikeza iLatuda ngokudangala, kubalulekile ukubuka izimpawu zokuzibulala kufaka phakathi:
Umbono wokuzibulala noma ukuphawula
Intukuthelo, ukucasuka, noma ulaka
Ukuziphatha okubeka engcupheni
Eminye imiphumela emibi emibi kanye nezinkinga ezivela eLatuda nokusetshenziswa ngokweqile kwezidakamizwa ezilwa ne-psychotic zifaka:
Imithi eminingi elwa ne-antipsychotic yehlisa umkhawulo wokubanjwa, okubeka iziguli engcupheni eyengeziwe yokuquleka ngenxa yezinye izimbangela. Ezivivinyweni zokwelashwa , iziguli ezithatha iLatuda zazinezinga eliphansi kakhulu lokuquleka, okwenza iLatuda ibe umuthi onobungozi obuncane bokuheha. Kodwa-ke, umenzi, iSunovion Pharmaceuticals Inc., weluleka ukuthi iLatuda isetshenziswe ngokuqapha ezigulini ezinomlando wokuquleka.
ingakanani ibhodlela le-insulin
Ekugcineni, uLatuda uphakamisa ubungozi bokushaywa unhlangothi nokufa ezigulini ezingaphezulu kweminyaka engama-65 ezine-psychosis ehlobene nokuwohloka komqondo. Ngalesi sizathu, iLatuda ayivunyelwe ukwelapha isifo sengqondo esihlobene nokuwohloka komqondo.
Ukuzuza kwesisindo seLatuda
Imithi elwa ne-antipsychotic ibangela ushintsho lwe-metabolic kanye nokuzuza kwesisindo njengemiphumela emibi engadingeki, kepha ubukhulu bokuzuza kwesisindo buyehluka ngezidakamizwa. Kodwa-ke, ngokuya ngesilingo esifanayo somtholampilo esiboniswe ngenhla, amaLatuda athola amaphuzu ekugcineni okuphansi, abangela ukuzuza okulinganiselwe kwesisindo esingamakhilogremu owodwa esikhathini esifushane futhi cishe amaphawundi amabili esikhathini eside (unyaka owodwa). Cishe u-4.8% weziguli kulolu cwaningo zithole ngaphezu kuka-7% wesisindo somzimba uma kuqhathaniswa no-3.3% obethatha i-placebo.
Kusho ukuthini konke lokhu ukuthi ubungozi bokuzuza isisindo lapho uthatha iLatuda buphansi kunamanye ama-antipsychotic. Lokhu kungenxa yemiphumela ebuthakathaka kaLatuda ezinhlotsheni ezithile zama-receptors ezisebenza ngeminye imishanguzo yokulwa ne-psychotic. Ngenxa yalokhu, imiphumela emibi njengokuzuza kwesisindo, ukuthuthumela, kanye ne-orthostatic hypotension ayijwayelekile kakhulu futhi ayinamandla kangako kunezinye izidakamizwa zokulwa nengqondo. Kodwa-ke, umenzi weluleka ukuthi isisindo sibhekwe ngokucophelela lapho uthatha iLatuda.
Azikho izifundo noma izivivinyo zomtholampilo ezigxile kuzimpawu zokuhoxa kweLatuda, noma kunemibiko yokuhoxa kweLatuda. Umkhiqizi noma i-Physician's Desk Reference kabacacisi ukuhoxa njengomphumela wecala noma batusa uhlobo lwemithamo ye-tapered lapho kumiswa iLatuda.
Kodwa-ke, imishanguzo ye-antipsychotic esebenza ngendlela efanayo neLatuda, ebizwa ngokuthi abaphikisi be-dopamine, ingadala izimpawu zokuhoxa lapho iyekiwe, kepha akuzona zonke iziguli ezizothola imiphumela yokuhoxa lapho ziyeka i-antipsychotic atypical. Lokho okwenzayo kungahle kube nezimpawu zokuhoxa ezimnene noma ezinzima. Noma kunjalo, i- I-American Psychiatric Association uncoma ukunciphisa umthamo ngo-10% inyanga ngayinye lapho uyeka imishanguzo yokulwisana ne-psychotic ukunciphisa ubungozi bokuhoxa noma ukuphindaphinda kwezimpawu.
Uphawu oluvame kakhulu lokuhoxa lapho uyeka i-antipsychotic uphawu luphindaphindiwe. Uma isiguli besingenazimpawu isikhathi esithile, ukubuya kwezimpawu kungabonakala kubi kakhulu kunangaphambi kokwelashwa. Ezinye izimpawu zokuhoxa kwe-antipsychotic zibandakanya ukunyakaza okungazibandakanyi, ukudikiza, ukunyakaza okuhamba kancane, ukuphoqeleka ukuhamba, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo nobuhlungu besisu. Umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo angahle anikeze imishanguzo kaParkinson yokunciphisa ukuhoxiswa kwe-antipsychotic.
Ihlala isikhathi esingakanani imiphumela emibi yaseLatuda?
Imiphumela emibi ingahlala inqobo nje uma kuthathwa iLatuda, kepha eminye imiphumela emibi engehlisi ingancipha ngokuhamba kwesikhathi. Ngemuva kokwelashwa kwesikhathi eside, uLatuda uzothatha cishe izinsuku ezimbili kuya kwezine ukusula ngokuphelele emzimbeni. Imiphumela emibi kakhulu emincane neminye emibi izoqala ukuxazululwa ngaleso sikhathi. Ngeshwa, eminye imiphumela emibi kakhulu ingathatha isikhathi eside ukuyixazulula kanti eminye, efana ne-tardive dyskinesia, ingahle ingalungiseki.
Ukuphikisana kweLatuda nezixwayiso
ILatuda iza nesixwayiso sebhokisi elimnyama le-FDA lokuthi akumele lisetshenziselwe ukwelapha isifo sengqondo esihlobene nokuwohloka komqondo ngenxa yengozi yokufa noma yokushaywa unhlangothi. ILatuda nayo akufanele ithathwe ngu:
Abantu abaphikisana ne-lurasidone noma ezinye izithako ezingasebenzi
Abantu abathatha izidakamizwa noma izinto ezizophazamisa kakhulu umzimba we-lurasidone
Ukubalwa kwamaseli egazi amhlophe aphansi
Imicabango yokuzibulala noma isimilo
Ushukela ophakeme wegazi, amafutha, noma i-cholesterol
ILatuda yelapha abasebasha abaneminyaka engu-13 nangaphezulu i-schizophrenia kanti izingane nentsha eneminyaka engaphezulu kweyi-10 yokudangala kwe-bipolar. Ukuphepha kweLatuda akukaze kufundwe ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-10.
Lapho isetshenziselwa ukwelapha ukucindezeleka kwe-bipolar, iLatuda iphakamisa kakhulu ingozi yemicabango yokuzibulala nokuziphatha ezinganeni nasebusheni. Izingane neziguli ezisencane kufanele zibhekwe ngokwanda kokucindezeleka noma izimpawu zokuzibulala.
Azikho izifundo zokuphepha zokusetshenziswa kweLatuda kwabesifazane abakhulelwe noma omama abahlengikazi. Kunobufakazi be-anecdotal bezinsana ezinezinkinga zokuhamba nezimpawu zokuhoxa lapho i-antipsychotic ithathwa ku-trimester yesithathu yokukhulelwa. ILatuda ingahle ifihlwe obisini lwebele, kepha amanani alinganisiwe. Njenganoma imuphi umuthi we-antipsychotic, abesifazane kufanele baxoxe ngobuhle nobubi bokuthatha iLatuda ngenkathi ukhulelwe noma unesi.
Ukuphepha kweLatuda kubantu abaneminyaka engaphezu kwengama-65 akukaze kufundwe kahle futhi nemininingwane ebekwayo iyaxwayisa ekubekeni asebekhulile (abaneminyaka engama-65 nangaphezulu). Ngakho-ke, ukhetho lokunikeza lo muthi kuleyo minyaka yobudala engama-65 nangaphezulu, ngokuxilongwa kwe-schizophrenia noma ukucindezeleka kwe-bipolar, lwenziwa ngokuya ngamacala ngokubonisana nomhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo. ILatuda iphakamisa ubungozi bokushaywa unhlangothi nokufa ezigulini esezikhulile ezine-psychosis ehlobene nokuwohloka komqondo, ngakho-ke iLatuda ayivunyelwe kulezo ziguli.
Ezidakamizweni ezinjengeLatuda, ukuxhumana kwezidakamizwa kuyinkimbinkimbi futhi kuyadida. Ukwenza lula ukusebenzisana kweLatuda, ezinye izidakamizwa akufanele zithathwe noma zithathwe ngokuqapha ngoba zinga:
Phazamisa amandla omzimba wokwephula i-lurasidone, isithako esisebenzayo eLatuda noma
Imiphumela emibi ye-Worsen
Ama-inducers nama-inhibitors e-CYP3A4
ILatuda ayivunyelwe ukusetshenziswa nemithi enamandla ye-CYP3A4 inducers kanye ne-inhibitors. Kalula nje, le mithi isheshisa ukonakala kwe-lurasidone ngumzimba (i-CYP3A4 inducers) noma ivimbele futhi yehlise ukubola kwe-lurasidone (CYP3A4 inhibitors).
Izidakamizwa ezisheshisa ngokuqinile ukonakala kwe-lurasidone zizokwehlisa kakhulu ukusebenza kwayo. Lokhu kufaka phakathi:
Imithi elwa namagciwane : i-rifampin, i-rifaximin, ne-rifamycin
Izinhlobo ezithile zama-anticonvulsants : i-carbamazepine, i-phenytoin, i-primidone, ne-fosphenytoin
Ama-barbiturates : i-pentobarbital ne-phenobarbital
I-Dexamethasone, iLysodren (mitotane), i-Xtandi (enzalutamide), i-Erleada (apalutamide), i-Orkambi (lumacaftor), neRydapt (midostaurin)
Izidakamizwa ezinesilinganiso esilinganiselwe noma esibuthakathaka ezisheshisa ukonakala kwe-lurasidone zingathathwa, kepha odokotela bangadinga ukuguqula inani lokwelashwa noma lamanani.
Izidakamizwa nokudla okwehlisa ijubane lomzimba lomzimba we-lurasidone, noma kunjalo, kwandisa ukuhlushwa kweLatuda egazini ngakho-ke kwandisa ubungozi bemiphumela emibi. Ama-inhibitors anamandla kakhulu okungafanele athathwe neLatuda afaka:
Isithelo segilebhisi, i-curcumin, negolide
Izinhlobo ezithile zama-antibiotic : i-clarithromycin, i-erythromycin, i-troleandomycin, ne-telithromycin
Izidakamizwa ze-Antifungal (azole) : econazole, ketoconazole, voriconazole, methimazole, ne-posaconazole
Imishanguzo yegazi : i-diltiazem ne-verapamil
Izinhlobo ezithile zemithi elwa namagciwane : ritonavir, atazanavir, darunavir, lopinavir, efavirenz, tipranavir, Incivek (telaprevir), Invirase (saquinavir), Rescriptor (delavirdine), Crixivan (indinavir), Vitekta (elvitegravir), Victrelis (ncepcevir)
Izinhlobo ezithile zamasosha omzimba eziguqula imishanguzo yokulwa nomdlavuza njengeTasigna (nilotinib), Kisqali (ribociclib) iZydelig (idelalisib), neRydapt (midostaurin)
I-Ergotamine, terfenadine, nefazodone, loperamide, cobicistat, Vaprisol (conivaptan), Diacomit (stiripentol), naloxone, danazol, kanye lonafarnib
I-Grapefruit inezinto ezibuye zibe yi-CYP3A4 inhibitors. Kodwa-ke, lezi zinto aziphazamisi amandla omzimba wokusebenzisa i-lurasidone emzimbeni, kodwa kunalokho vimba inqubo efanayo emathunjini . Lokhu kusho ukuthi umzimba umunca i-lurasidone engaphezulu kunalokho obekuvame ukwenziwa, okwandisa ubungozi bemiphumela emibi. Imiphumela yesithelo samagilebhisi kumaseli emathumbu ingahlala isikhathi eside njengamahora angama-24, ngakho-ke isithelo samagilebhisi kufanele sigwenywe ngokuphelele ngenkathi sithatha iLatuda.
ILatuda iyisistimu yezinzwa ecindezelayo. Kubambezela ubuchopho. Le miphumela izothuthukiswa uma iLatuda ithathwa namanye ama-system central nervous depressants. Imiphumela ingaba yingozi emzimbeni. Uma kungenjalo, ukukhathala nokulahleka kolawulo lwezimoto kungakhuphula ubungozi bengozi noma bokulimala. Lapho uthatha iLatuda, ezinye izingcindezi ze-CNS kufanele zigwenywe noma zisetshenziswe ngokuqapha kufaka phakathi:
Utshwala, insangu, ama-cannabinoids, i-ginseng, noma i-Gotu kola
Ama-antihistamine njengeBenadryl (diphenhydramine), doxylamine, ne-pheniramine
Izidakamizwa njenge-codeine, i-morphine, noma i-tramadol
Izindlela (izinsiza zokulala) njenge-midazolam noma i-estazolam
Imithi yokukhathazeka njenge-buspirone noma i-diazepam
Izidakamizwa zezinhlungu zemizwa njenge-gabapentin, i-gabapentin enacarbil, noma i-pregabalin
Izidakamizwa zokulwa nesicanucanu njenge-metoclopramide noma i-ondansetron
Ama-anticonvulsants njenge-carbamazepine ( kuyaphikiswa ), phenytoin, lamotrigine, noma levetiracetam
Akuzona zonke lezi zidakamizwa okufanele zigwenywe ngqo, kepha zonke kufanele zithathwe ngokuqapha okukhulu nangokubonisana nodokotela noma omunye umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo. Gwema ukushayela, ukusebenzisa imishini, noma ukwenza izinto eziyingozi lapho uhlanganisa ukucindezela okubili noma ngaphezulu kwe-CNS.
Ukuquleka ukudubula okungalawulwa, okungahleliwe nokuphindaphindwayo kwezifunda zemizwa ebuchosheni. Zingahluka ukusuka ekushibilikeni kwengqondo okungabonakali kuya kokudlikizela komzimba. Ezifundweni zokwelashwa , ukuquleka bekungumphumela oseceleni weLatuda ngesilinganiso esifanayo ne-placebo, okwenza iLatuda ibe yimithi elwa ne-antipsychotic ephephile. Noma kunjalo, iLatuda nayo yonke eminye imishanguzo yokulwisana ne-psychotic yehlisa umkhawulo wokubanjwa, okubeka iziguli engcupheni ephezulu yokuquleka. Ngalesi sizathu, abahlinzeki bezokunakekelwa kwezempilo bazokugwema ukuhlanganisa iLatuda nemithi engadala ukuquleka kubandakanya i-Firdapse (amifampridine), i-Wellbutrin (i-bupropion), nezinhlobo ezithile zemithi esetshenziselwa i-X-ray noma enye i-imaging.
ILatuda ingaxhumana neminye imithi nezimo ezinjenge:
Ungayigwema kanjani imiphumela emibi yeLatuda
Ama-antipsychotic anjengeLatuda ngokuvamile abangela imiphumela emibi. Kwesinye isikhathi, le miphumela emibi iholela iziguli ukuthi ziyeke ukuthatha umuthi. Gcina ukhumbula ukuthi yonke imishanguzo yokulwisana nokugula ngengqondo iwukuhweba phakathi kwezinzuzo zazo ezivame ukubonakala kanye nemiphumela yazo emibi ngokulinganayo.
Landela lawa macebiso lapho uthatha iLatuda ukunciphisa ubungozi bemiphumela emibi yaseLatuda ngenkathi uqinisekisa inzuzo enkulu ngokuthatha umuthi:
1. Thatha uLatuda njengokuyalelwa
Thatha umthamo wansuku zonke njengoba kunqunyiwe. Unganyusi noma wehlise umthamo. Ngaphezu kwakho konke, ungathathi iholide losuku olulodwa noma ezimbili emuthini. Kumele ithathwe nsuku zonke esikhathini eside ukuthola izinzuzo zayo ezigcwele. Uma umuthi ubonakala ungasebenzi noma imiphumela emibi kunzima kakhulu ukuyisingatha, khuluma nomhlinzeki oshoyo mayelana nokushintsha umthamo noma ukushintshela emithini emisha.
2. Thatha uLatuda nokudla
ILatuda kufanele ithathwe ngokudla. Eqinisweni, kufanele ithathwe ngokudla okungenani ama-calories angama-350. Yize lokhu kungavimbeli imiphumela engemihle, kodwa kuqinisekisa ukuthola izinzuzo eziphezulu ekuthatheni umuthi.
3. Tshela umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngazo zonke izimo zakho zezokwelapha nemithi
Ngenxa yobungozi bemiphumela emibi, kufanele utshele umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo mayelana:
Noma iziphi izimo zomzimba ongahle ube nazo, ikakhulukazi
Ushukela ophakeme wegazi, isifo sikashukela, noma isifo se-metabolic
Umlando wokuquleka noma isithuthwane
Umlando wamazinga aphezulu we-prolactin
Isifo noma izimpawu zikaParkinson
Noma ikuphi ukusetshenziswa kotshwala, ukusetshenziswa kwezidakamizwa zokuzijabulisa, noma umlando wokusebenzisa kabi izidakamizwa
Yonke imithi oyiphuzayo njengamanje
Yonke imishanguzo yokuthenga kanye nezengezo ozivamise ukuzithatha
Hlala ukhuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo nganoma imiphi imiphumela emibi ohlangabezana nayo lapho uthatha iLatuda noma yimuphi omunye umuthi kadokotela.
4. Gwema utshwala, ama-antihistamine, nezicindezeli
Noma iyiphi into eyehlisa ijubane ebuchosheni njengotshwala, insangu, ama-antihistamines, kanye nezidakamizwa ezizolulaza izoyenza ibe yimbi imiphumela yokukhubazeka okuthambisayo nokuqonda kweLatuda, kukhuphule ubungozi bezingozi noma bokulimala. Lapho uthatha iLatuda, ungashayeli, usebenzise imishini, noma wenze izinto eziyingozi uze wazi ukuthi umuthi ukukuthinta kanjani. Kungumqondo omuhle futhi uma uthatha izidambisi ze-CNS ezinjengeLatuda ukususa izithiyo kanye nezingozi ezizungeze indlu ukunciphisa ubungozi bokulimala ngengozi.
5. Ungadli i-grapefruit noma uphuze ijusi lamagilebhisi
I-Grapefruit nejusi yamagilebhisi ayivunyelwe lapho uthatha iLatuda. I-Grapefruit inezinto ezandisa inani le-lurasidone emuncwa umzimba, okwandisa ubungozi nobukhulu bemiphumela emibi yaseLatuda. Eminye imishanguzo nezinto kungakhuphula nokuhlushwa kweLatuda emzimbeni, ngakho-ke qiniseka ukuthi uxoxa nomhlinzeki oshoyo ngayo yonke imithi, izithasiselo, namakhambi asetshenziswayo.
6. Gwema ukushisa ngokweqile
ILatuda neminye imishanguzo yokuthithibalisa ingqondo iphazamisa amandla omzimba wokulawula ukushisa, okwenza ukushisa kube yingozi enkulu. Gwema ukushisa ngokweqile noma ukwehlisa amanzi emzimbeni ngoku:
ungawudlula kanjani umkhuhlane emahoreni angama-24
Ukuhlala endlini ngesikhathi sezulu esishisayo
Ukugwema ukusebenzisa ngokweqile noma ukuvivinya umzimba ngokweqile
Ukugwema ukuba selangeni isikhathi eside
Ukuphuza amanzi amaningi
Gwema utshwala — nakho, kuphazamisa amandla omzimba wokulawula ukushisa komzimba
ILatuda , Epocrates
I-Lurasidone , StatPearls
Isifinyezo se-Lurasidone compound , Umtapo Wezincwadi Kazwelonke Wezokwelapha
I-Lurasidone hydrochloride , PDR
Izimpawu zokuhoxa ezilukhuni neziphikisayo kulandela ukumiswa kwemithi yokwelashwa kwengqondo , I-Psychotherapy ne-Psychosomatics
Ukuzuza kwesisindo okuhambisana ne-antipsychotic: amasu okuphatha kanye nomthelela ekubambeleleni ekwelashweni , Izifo Ne-Neuropsychiatric kanye Nokwelapha
I-Biochemistry, iCytochrome P450 , StatPearls
Ukuguqulwa kweshukela okubangelwa izidakamizwa okuyingxenye 2: i-hyperglycemia eyenziwe yizidakamizwa , Isifo Sikashukela Spectrum
I-hyperprolactinemia eyenziwe ngemithi , Umtholampilo waseMayo
Ukubaluleka kwezokwelapha kwejusi yamagilebhisi nokuhlangana kwayo nezidakamizwa ezahlukahlukene , Ijenali Yezokudla
Umhlahlandlela Wokuzijwayeza Wokwelashwa kweSchizophrenia , I-American Psychiatric Association
I-dyskinesia yamuva , StatPearls
Ingabe ukudangala nesifo senhliziyo kuxhumene?
I-diuretics: Ukusetshenziswa, imikhiqizo ejwayelekile, nolwazi lokuphepha
ikuphi indawo eshibhile yokugcwalisa imiyalo
i-apple cider uviniga isilinganiso somfutho wegazi
umphatha kanjani uthi ekhaya
ingakanani ibuprofen ne-tylenol ongayithatha ndawonye
Ingabe i-chantix ivela ekuhlolweni kwezidakamizwa
ibiza malini i-walgreens flu